Ahoana ny fikajiana kaonty mampiasa mpampiasa
Ny isan-jato dia midika hoe "isaky ny 100" na "isaky ny zato". Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny isan-jato dia lanjany mizara 100 na 100 isanjato. Maro ny fampiasana tena ampiasain'ny olona hahitana ny isan-jato. Ny mpandraharaha ara-barotra, ny mpivarotra fiara, ary ny solontenan'ny varotra fanafody dia mahazo kaomandy izay ampahany, na ampahany, amin'ny varotra. Ohatra, ny mpandraharaha ara-barotra dia mety hahazo ny ampahany amin'ny vidin'ny varotra trano iray izay manampy ny mpanjifa mividy na mivarotra.
Ny mpivarotra fiara iray dia manome ampahany amin'ny vidin'ny varotra fiara iray izay amidiny. Ny olana eo amin'ny fiainana arahin'ny fiainana dia afaka manampy anao hahatakatra bebe kokoa ny dingana.
Fanatsarana ny komisiona
Noel, mpandraharaha ara-barotra, dia mikasa hahazo fara-fahakeliny 150.000 $ amin'ity taona ity. Manana komisiona telo isan-jato izy ao amin'ny trano rehetra azony. Inona ny vola dolara tokan-trano tsy maintsy amidy mba hahatratrarana ny tanjona?
Atombohy ny olana amin'ny famaritana ny zavatra fantatrao sy ny zavatra tadiavanao hamaritana:
Noel dia hahazo $ 3 isaky ny $ 100 amin'ny varotra.
Hahazo $ 150,000 isaky ny (inona ny vola dolara) amin'ny varotra?
Asehoy ny manaraka, ny "s" dia ny fivarotana manontolo:
Mba hamahana ilay olana, dia miomàna. Voalohany, soraty amin'ny an-jambany ny fizarana. Raiso ny sombin-tsakafo voalohany (laharana ambony) ary ampitombo azy amin'ny anaran'ny laharana faharoa (laharana ambany). Avy eo dia alao ny sombin-tsoratra faharoa ary ampitombo azy amin'ny anaran'ny mpandray anjara voalohany, toy izao manaraka izao:
Zarao ny lafiny roa amin'ny alàlan'ny 3 mba hamaha ny s:
Noho izany, mba hanome $ 150.000 amin'ny komity isan-taona, dia tsy maintsy mividy trano izay 5 tapitrisa dolara i Noel.
Ericka, mpandraharaha ara-barotra iray hafa, dia manandanja amin'ny fametrahana trano fonenana.
Ny kaomisioniny dia 150 isan-jato amin'ny fampindramam-bola isam-bolana. Tamin'ny herinandro lasa teo, nahazo vola 850 dolara izy ho an'ny trano iray izay nanampiany ny mpanjifany handoa hofan-trano. Ohatrinona ny fanofana isam-bolana?
Manomboha amin'ny famaritana ny zavatra fantatrao sy ny zavatra tadiavinao hamaritana:
$ 150 isam-bolana isam-bolana isam-bolana no alaina ho an'i Ericka.
$ 850 isa (ohatrinona) amin'ny hofan'ny vola isam-bolana no omena an'i Ericka?
Asehoy ny olana toy izao manaraka izao, izay misy ny "r" ho an'ny fampindramana isam-bolana:
150/100 = $ 850 / t
Zarao ny lafiny roa amin'ny alàlan'ny alàlan'ny 150 mba hamahana ny r:
Noho izany, ny fampindramam-bola isam-bolana (ho an'i Jessica $ 850 amin'ny fanendrena) dia $ 556.67.
Pierre, mpandraharaha iray mpanakanto, dia manome ny 25 isan-jaton'ny komitin'ny vidin'ny varotra arovany. Pierre dia nahazo $ 10.800 tamin'ity volana ity. Inona no lanjan'ny vola nampiasainy?
$ 25 isaky ny $ 100 ny varotra karakanto Pierre dia nomena azy ho komisiona.
$ 10,800 isan-jato (ho an'ny vola dolara) amin'ny varotra karakanto Pierre dia nomena azy ho komisiona?
Soraty ny olana toy izao manaraka izao, izay misy ny "s":
Voalohany, mihazakazaka miha-maro:
Zarao ny lafiny roa amin'ny fihodinana amin'ny 25 mba hamaha ny s:
Noho izany, ny sandan'ny vola dolara rehetra nalain'i Pierre dia $ 43.200.
Alexandria, mpivarotra eo amin'ny fiara fitaterana fiara, dia manome ny 40 isan-jaton'ny komitin'ny fiara liam-pivarotana. Tamin'ny taona lasa, ny kaomionany dia $ 480,000. Inona ny tahan'ny dolara tamin'ny varotra tamin'ny herintaona?
Farito ny zavatra fantatrao sy ny zavatra tadiavinao hamaritana:
$ 40 isaky ny $ 100 amin'ny varotra fiara dia omena an'i Ericka ho komisiona.
$ 480.000 isa (inona ny vola dolara) amin'ny varotra fiara dia omena an'i Ericka ho komisiona?
Soraty ny olana araka izao manaraka izao, izay misy "s" mijoro ho an'ny fivarotana fiara:
Aorian'izany dia mihamaro ny hazo fijaliana:
Zarazarao ny lafiny roa amin'ny fihodinana amin'ny 40 mba hamaha ny s.
s = $ 1.200,000
Noho izany, ny sandan'ny sandam-bola tamin'ny fiara Alexandria tamin'ny taon-dasa dia $ 1,2 tapitrisa.
Agent ho an'ny mpanentana
Henry dia mpandraharaha ho an'ny mpanakanto. Nahazo 10% amin'ny karaman'ny mpanjifany izy. Raha nanao $ 72,000 tamin'ny herintaona izy, ohatrinona ny mpanjifany no nanao azy?
Farito ny zavatra fantatrao, ary ny zavatra tadiavanao hamaritana:
$ 10 isaky ny $ 100 ny karaman'ny mpampiofana dia alaina ho an'i Jacques ho komisiona.
$ 72,000 isa (inona ny vola dolara) amin'ny karaman'ny mpampiofana dia omena an'i Henry ho iraka?
Dia mihabetsaka ny fihobiana:
10s = $ 7.200,000
Zarao ny roa tonta amin'ny fifangaroana amin'ny 10 mba hamaha ny s:
10s / 10 = $ 7.200,000 / 10
Amin'ny ankapobeny, ny mpanjifan'i Henry dia nanao $ 720,000 tamin'ny herintaona.
Alejandro, solontenan'ny varotra famatsiam-bola, dia mivarotra ho an'ny mpamosavy. Manana komitin'ny 12 isan-jato amin'ny fivarotam-panafody amin'ny mpivarotra izy. Raha mahazo $ 60,000 amin'ny kaomisiona izy, inona no lanjan'ny vola vidin'ny zava-mahadomelina azony?
Ny $ 12 isaky ny $ 100 amin'ny sandan'ny fanafody dia aloa ho an'i Alejandro.
$ 60,000 isa (inona ny sandan'ny dolara) momba ny zava-mahadomelina dia omena an'i Alejandro ho komisiona?
Soraty ny olana manaraka, ny toerana misy ny "d" amin'ny sandam-bola dolara:
12/100 = $ 60,000 / t
Zarao roa ny elanelan'ny elanelana amin'ny 12 mba hamaha ny d:
Ny sandam-bolan'ny totalin'ny medikaly namoizan'i Alejandro dia $ 500,000.
Ahoana no hamaha ny isa?
Hitady ny isa ny fanovana
Ahoana no hamaha ny isam-bolana hanitsiana raki-tsoa iray?
Olana ny famahana ny paikady
Ady sefon'ny Amerikanina: Battle of Hampton Roads
Manidina amin'ny fiarandalamby: Iza no tsara ho an'ny tontolo iainana?
Fampahafantarana ny horonantsary
Zhidao - Lesona Mandariny isan'andro
Jack Nicklaus 'Masters mahomby
Vavaka ho an'ny alika an-trano
Inona no mitranga rehefa miala amin'ny fiainany mahafa-po?
Fanomanana hevitra amin'ny adihevitra: Mamakafaka endrika roa
Fampidirana an'i Noah Webster
Ny anjara asan'ny Plaza ao amin'ny Fetin'ny Maya
8 Fikirakirana Pregame Warmup ho an'ny ekipa mpilalao baseball tanora
Ambonin'ny College Orientation Tour
Ny bokin'ny Wayne Gretzky Record
Mpaka sary japoney malaza
Trajan Ny mpanjaka roman Marcus Ulpius Traianus
Biography ary Profile of Chuck Liddell
Inona no mitongilana?
Fifanakalozan-kevitra amin'i Frank Gehry - Review
Toerana fitsaboana any amin'ny Oniversiten'i Southwestern State University